बौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषबाट हटाउन ठुलो गिरोह लाग्यो :पूर्व अध्यक्ष लामा - Gokarna News from Nepal
बिहिबार, मङि्सर १९, २०७६
"सार्वजनिक जग्गा हडपेर अर्वपति बन्ने सपना नदेखे हुन्छ ''
शुक्रबार, असार ०६, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं – बौद्ध क्षेत्र विकास कोषका पूर्व अध्यक्ष राज कुमार लामाले बौद्ध क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षबाट आफुलाई हटाउन ठुलै गिरोह लागेको बताएका छन । गोकर्ण न्युजसँगको कुराकानीमा उनले आफुलाई हटाउन राज्य स्तकै गिरोह लागेको बताएका हुन । उनले वौद्ध क्षेत्र विकास र स्तुपा वरपरका वेथिति र विसगतीका विरुद्ध डटेर लाग्दै गर्दा केही समुहले आफ्ना विरुद्ध लागेको बताए । उनले भने ‘बौद्ध क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उदेश्य अनुरुप सरकारको सिफारिसका क्षेत्र विकासमा आएको थिए तर केही गलत नियत र पैसा खान पल्केका र स्तुपालाई केही व्यक्तीहरुले आफ्नो पैतृक सम्पती जस्तो बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको थिए । त्यो तिनिहरुलाई पचेन र अनेक षडयन्त्र अपनाएर १८ महिना भित्रै हटाए’ उनले भने ‘ ४ बर्षे कार्यकाल सम्म बौद्ध र विश्व सम्पदा सुचिकृत वौद्ध स्तुपालाई नयाँ उचाईमा पु¥याउने दृढ संकल्पमा छिरेको थिए त्यसमा केही समिति भित्रैका मान्छे र केही बाहिरका मान्छे मलाई हटाएर हिजोको जस्तो वेथिति र एकलौटी सम्पती बनाउन ध्ययेमा लागेकै कारण यस्तो परिणाम आएको हो । ध्याङ गुठी र क्षेत्र विकास कोषको लडाईले केही दिन बौद्ध स्तुपा अशान्त बनेको थियो भने उता ध्याङ गुठीका अध्यक्ष ब्रज लामा विदेशी नागरिक भएको भन्दै कुनै अवतारी खेम्पोपास नगरी अवतारी गुरुको नाममा सबैलाई भ्रममा राखेको लामाले बताउदैं आएका थिए । उनले दोहोरो नागरिकताधारी ब्रज लामाका विरुद्धमा गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाएको र गृहबाट समेत कारवाहीको लागी पत्र सिडियो कार्यलयमा आएतापनि सिडियो कार्यलयले कुनै कारवाही र अनुसन्धान नगरेको भन्दै सिडियो कार्यलय समेत पैसाका बिकेको दावी गरे ।
राजकुमार लामा वौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषको पूर्व अध्यक्ष,पूर्वी क्षेत्रिय युवा तथा खेलकुद संजाल संयोजक राष्ट्रिय तामाङ एकता समाजका अध्यक्ष एव्म भष्टचार र वेथिति विरुद्धको अभियानमा समेत सक्रिय रुपमा अभियान्तका रुपमा लागेका छन् । उनको कार्यकालमा भएका काम र ध्याङ गुठी –क्षेत्र विकास बिच उत्पन्न तनाव र भष्टचार विरुद्धका अभियानका बारेमा गोकर्ण न्युजकर्मी बिष्णु आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अशं
म वौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षबाट हटिसकेपछि पनि निरन्तर पुरानो काम अर्थात म पूर्वी क्षेत्रिय युवा तथा खेलकुल संजालको अध्यक्ष साथै राष्ट्रिय तामाङ एकता समाजको अध्यक्ष पनि छु । संजालका,गुठीका काम साथै भष्टचार र वेथिति विरुद्धका अभियानमा दिन व्यतित गर्दै सामाजिक काममै होमिएको छु ।
वौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्षमा तपाईलाई किन पत्याईन र १८ महिनामै हटाइयो ?
नपत्याउने भन्ने कुरै होईन। नेपाल सरकारले २०७४ साल भदौ १४ गते वौद्ध क्षेत्रको समग्र विकासको लागी मेरो संयोजकतवमा एउटा टिम पठायो । विश्वास गरेर सरकारको सिफारिसमा आएको हु । मेरो कार्य क्षमता र कार्यकौशलतालाई देखेरै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आएको हु । मैले देखेको वौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिमा भएका वेथिति विसंगतीलाई निमट्यान्न पार्ने र वौद्ध स्तुपालाई नै अझ उचाईमा पु¥याउने संकल्प लिएर छिरेको थिए तर खान पल्केका र वौद्ध क्षेत्र र स्तुपानै आफ्नो पकेटको सामान जस्तो बनाउन पल्केकाहरुले मेरो कार्यले सैह्य भएन अनेक तिकडम गरेर ठुलै गिरोह लगाएर हटाएका हुन । काम गर्न नसकेर भन्ने पटक्कै होईन । मलाई हटाउन पैसाको खोलो बगाईयो भन्ने सम्म सुनेको छु ।तेती मात्र होईन मेरै समितिका गलत मनशायका मानिसका कारण पनि यस्तो वातावरण बन्यो जहाँ उनिहरु खेले । जसको मगसतनै कामई खाउ धन्दा र राष्ट्रको कोषको दोहन गर्ने विचारका समुह समितिमा मै हावी भए । मेलै त्यस्ता वेथेती का विरुद्ध डटेरै लागे राम्रो काम गर्दा टिक्न दिईएन ।
कसले बगायो पैसाको खोलो ?
मैले सुनेको छु यसबारे के कसो तपाईहरु खोज्दा राम्रो होला । तथ्य फेला पर्दा म अवश्य जानकारी गराउने छु ।
क्षेत्र विकास समितिमा छिर्न ठुलै रकम तिर्नु पर्छ भन्ने सुनिन्छ तपाईले कति तिरेर छिर्नुभएको थियो ?
म एउटा देशलाई केही गर्नु पर्छ भन्ने अठोट र संकल्प बोकेर आएको व्यक्ति मैले पैसा र पावर देखाएर होईन वौद्ध क्षेत्रको समग्र विकास गर्न भनेर नियुक्ति पाएको हुँ । हो केही मान्छे छन् पैसा फालेर यता कामउ धन्दा गर्ने पनि तर मेरो हकमा त्यस्तो पैसा फालेर आउनु पर्ने जरुरी छैन । मेरो कार्यक्षता युवाको जोस र जागरलाई सरकारले पत्याएको हो । म पैसाका लागी पछि पर्ने मान्छे होईन देशलाई बनाए समग्र हामी र देश बन्ने हो पैसा बुझाएर यसमा आएर फेरी कामउ धन्दामा लाग्ने काम मेरो लागी सैह्य कहिले भएन र हुँदैन पनि । मत आफै भष्ट्रचार विरुद्धमा लागिरहेको मान्छे मलाई त्यस्तो गर्न आउदैंन तर बजारमा हल्ला के फिजाइए छ भने पैसामा आएको भन्ने त्यस्ता गलत र भ्रामक हल्लाका पछि लाग्नुको कुनै तुक छैन । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।
तपाई अध्यक्षमा नियुक्ती भएर आएपछि वौद्धलाई अशान्त पारियो भन्छन नी किन ?
मैले सुरुमै भनि हाले मैले अशान्त पारेको छैन । तर गलत प्रचार यस्तै गरिएको रहेछ । कानुननी रुपमा कानुनको पालन गरेर हिड्न सिकाउदा कानुन मान्दैनौ भन्ने र कानुन विपरितका काम गर्न रोक्न खोज्दा अशान्त पारियो भन्दै हिड्नेहरुको भनाईमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । वौद्धनाथ क्षेत्र विकासमा ६० घरेको साम्रराज्य छ । उनिहरु बाहेक अरु कोही हुन नपाउने भन्ने उनिहरुको सोच छ तर विश्व सम्पदामा सुचिकृत स्तुपा कुनै घर विशेषको हुँदैन यो त राष्ट्रको सम्पति हो । सरकारको अधिनमा रहेको सम्पती हो त्यसमा हाम्रो मान्छे मात्र राख्न पाउनु पर्छ भन्ने सोच राखेर अगाडी बढ्ने , सरकारको निर्देशन नमान्ने सामाजिक अभियान्ता हौं भन्ने तर वेथितिका बारे चुइक्क नबोल्ने तर राजकुमारले सरकारको मापदण्ड भित्र र निर्देशनको काम गर्दा कार्यक्षमता भएन भन्दै उफ्रने सामाजिक व्यक्ति यहि समाजमा छन । यस्तैका कारण पनि नभएका कुरा समेतमा प्रोपोकाण्ड मच्चाईएको हो । यति सम्म कि ६० घरे बाहेक अन्य तामाङ जातीले समेत सदस्यता नपाउने,अध्यक्षत परैका कुरा भए,हिन्दु गैर हिन्दुका कुरा त परैका भए यहि वरिपरी भएका तामाङ जातीलाई समेत घेरामा राखेर यस्तो एकाधिकार जमाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने परिपाटीमा म लाग्दा यस्ता हर्कत भए । अशान्त पा¥यो भनेर अपवाह फैल्याईयो ।
घ्याङगुठी र क्षेत्र विकास कोषको विवाद के थियो ? विवाद गर्नु पर्ने कारण के ?
जव म अध्यक्ष भएर आए घ्याङ गुठीका भुपती ब्रज लामाले बारम्बार मिलेर जाने प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । उहाँको तेति मात्र प्रस्ताव होइन अन्य पनि थिए ।म मिलेर जाने कुरामा पूर्ण सहमत थिए । तर उहाँ गैर कानुनी ढङ्गबाट जाने प्रस्ताव ल्याउनु भयो त्यो प्रस्ताव मलाई सैह्य भएन । एति सम्मकी आर्थिक प्रलोभन,विभिन्न देश विदेश घुमाई दिने, ठुलाठुला मान्छे सँग भेट्टाई दिने सम्म भए । संस्कृती तथा पर्यटन मन्त्रालयको बोर्ड सम्म काँही राख्न नपाउने सम्मका प्रस्ताव आए । म स्वयम अध्यक्ष छु के त्यस्ता कुरा मलाई सैह्य हुन्छन् मैले मानिन् । उहाँ के चाहनुहुँदो रहेछ भने सबै कुरा पैसाले मिलाउछु भन्ने । सरकारको बोर्ड मान्य नहुने, घ्याङ गुठीको वोर्ड मात्र राख्ने कुरामा मैले ३ दिनै बैठक बसालेर फुल साईजको पर्यटन मन्त्रालयको वोर्ड राखे विवाद यस्तै साना कुरा बाट भएको हो । उहाँले यति सम्म गर्नु भयो कि सरकारको वोर्ड माथी घ्याङ गुठीको वोर्ड राख्नु भयो पेलेर जाने मात्र काम हँुदै जादा विभिन्न विवाद आएका हुन । बौद्धनाथ आफैमा विश्व सम्पदा सुचिमा रहेको सम्पदा हो । सम्पदा माथि नोक्सानी पु¥याउदा हामी चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । चिनिया मुलका र घ्याङ गुठीका केही मानिस लगाएर स्तुमाथि ड्रिल गरेर किला ठोकिन्छ, तारबारले नोक्सान पु¥याइन्छ भने त्यस्ता क्रियाकलापलाई रोक्ने हाम्रो दाहित्व पनि हो । त्यसलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर रोक्न खोज्दा राजकुमारले हातपात ग¥यो यावत लान्छान लगाए । हजारौ प्वाल पारेको प्रमाण छन् । भिडियो फुटेज छन् । पुरातत्व विभागका र मन्त्रालयमा निवेदन गर्यौं । पुरातत्वले ३ वटा प्रतिवेदन बनाएको छ , निष्कर्ष भुपति ब्रज लामाले ड्रिल गरेकै हो , क्षती गरेको, ४ इन्च होल, विदेशीले गरेकै हो भनेरै प्रतिवेदन बनाएकै छ । प्राचिन स्मारक ऐन सांस्कृति सम्पदा मास्ने, क्षति पु¥याउने,कुरुप बनाउने, लाई १५ बर्ष जेल सजाए भनेको छ । तर त्यो कुरामा न मुद्धा हाल्न सक्छ न मन्त्रालयले कारवाही गर्न सक्छ । कारण आर्थिक चलखेलकै हो । यति सम्मकी राज्य मन्त्रीबाट फाईल र कारवाही अगाडी बढाउने कुरामा रोकेको भन्ने सम्म सुन्याछु । उहाँ त राज्य भन्दा माथि हुनुभयो । एउटा गुठीको लामा प्रमुख लाई कारवाही गर्न नसक्नु कस्तो विडम्वना होला तपाई आफै भन्नु । विश्व सम्पदामा सुचिकृत पुरातत्वको एउटा कार्यनिर्देशिका भनिया छ सम्पदा भित्र अत्यावश्यक एम्वुलेन्स,दमकल बाहेकका सवारी लैजान नपाईने कानुनी व्यवस्था छ । गृहमन्त्रालयकोआदेश छ ब्रज लामा का सवारी नलैजानु भन्ने आदेश सिडियोको आदेश छ तर उहाँ टेर्नुहुन्न, उहाँलाई कसैले रोक्न सकेन , नत त प्रहरी नत कानुन नत त राज्य उहाँ राज्य भन्दा माथि हुनुभयो । सबै कुरा पैसामा तह लगाउछु भन्ने दम्भमा हुनुहुन्छ उहाँ ।
अनि हागगुजी गर्दै राजकुमारले हातपात ग¥यो भन्छन । यो भ्रम छर्ने बाहेक केही होइन । राजकुमारले विवाद निकाल्यो , हाम्रो मान्छे हातपात ग¥यो भन्ने कुरा कपोकल्पीत हुन । यसमा सत्यता छैन । विवाद पनि त्यस्तो ठुलो होईन अनावश्यक उचालियो । कानुन अनुरुप काम गर्दा खान पल्लेकाले खान नपाउने भए त्यसरी यसरी विवाद बनाईयो ।
ब्रज लामा दोहोरो नागरिता धारी हो ,अवतारी रेम्बोछे गुरु होईन भन्नु हुन्छ कारण के ? के छ आधार तपाईसँग ?
वास्तवमा कुनै पनि नागरिकले नागरीकताता हराएमा नागरीकता मा सच्चाउन बनाउन सक्छ तर श्री, राजा,भगवान,गुरु ,अवतारी नागरितामा राख्न पाईदैन कानुनमा त त्यो व्यवस्था छैन तर उहाँकोमा कसरी आयो नागरीतामै अवतारी गुरु भएर आयो । उहाँले दुई चोटी नागरिता संशोधन गर्नु भएको छ । नामको अगाडी पछाडी ‘हिज होलीनेश गुरु रेम्बोछे ब्रज लामा’ राखेको छ । के त्यो कानुन सम्वत छ त ? के तपाई मलाई महाराजा बनाईदिनु प¥यो भनेर सिडियो कार्यालयले बनाउन दिन्छ त दिदैन तर उहाँलाई कसरी दियो प्रश्न यहाँ छ । नागरिताको बिषयमा एउटा नागरिक र अभियान्ताको हैसिएतले पनि यो गलत भयो भनेर गृहमन्त्रालयमा ३ वटा निवेदन परेको छ । गृहले गलत भनेकै छ । गलत भयो भनेर सिडियो कार्यलयलाई पत्र दिएको भन्ने छ तर सिडियो कार्यालयले कार्वाही गर्दैन कारण के ? यसर्थ सिडियो कार्यालय समेत आर्थिक चलखेलमा फसेको छ । उहाँ पैसामा सबै थोक गर्न सक्छु भन्नेमा हुनुहुन्छ । उहाँ (ब्रज लामा) हङ्कङको स्थायी बसोकास कार्ड पाउनु भएको छ यता नेपालको पनि लिनु भएको छ । हङकङको स्थायी बसोबासको कार्ड लिने अनि नेपालको सम्पदामा प्रमुख भएर बस्ने यो कहाँ सम्मको विडम्वना हो । उहाँ गुरु अवतारी गुरु भन्दै भ्रमको खेती छर्दै हिड्नु भएको छ ।
पानि खोल्साको विवादको वास्तविता के हो ?
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा ९को पानी खोल्सामा मा रहेको पुरानो ऐतिहासिक खेल मैदान हिजो खुल्ला सार्वजनिक प्रति जग्गा हो । जुन करिव ४२ रोनी जग्गामा फैलिएको छ , अहिले केही राजनीति दलका परिपाटी र भुमाफीया कारण खुम्चीदै आएको छ । त्यहाँ कस्तो खेल भईरहेको छ भने गुठीमा दर्ता गराएर आफुलाई मोह्यानी कायम गर्ने र मोह्यानी दावी गर्ने प्रपञ्च भएको देखियो ।त्यहाँको मुद्धा लिएर हिडेको म १२ बर्ष भयो । तेतिबेला पूर्वी क्षेत्रिय युवा तथा खेलकुद संजाल संस्था मेरो नेतृत्वमा गठन भयो, जसमा स्थानिय ३२ क्लव,संघ संस्थाको छत्र संगठनको रुपमा काम गर्दै आएको छ । संजालको काम सार्वजनिक प्रति जग्गाको खोजी गर्ने, संरक्षण गर्ने र त्यो संरक्षीत जगगामा खुला खेलग्रामको विकास गराउन भन्ने थियो । आज भन्दा ४ बर्ष अघि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको र यस क्षेत्रको प्रति जग्गा संरक्षण समितिको संयोजक मलाई दिईएको थियो । जुन नगरपालिकाले बनाएको आधिकारीक समिति थियो । मलाई कामको नेतृत्व पाएपछि म काममा तल्लीन भए सबै जग्गाको एकिन गरे । तर मेरा कामको विरुद्ध तात्कालिन नगरपालिका कार्यकारी इन्दीरा कुमारी थपलिया नै व्याग् गराउन लाग्नु भयो । उहाँलाई यसका विरुद्धको गिरोहले प्रयोग ग¥यो । रेखाङ्कन कार्यमा तात्कालिन सांसद रामेश्वर फुयाल, तात्कालिन सहायक सिडियो र स्थानियको रोहवरमा रेखाङ्कन गरियो तर कार्यकारी नै उपस्थिती हुनु भएन । उहाँले किला राख्नको लागी किलालाई नत त रकम दिनुभयो नत केही तर हामी युवाहरुले भाटा भएपनि निशाना लगायौ । ति के टिक्थ्यो र अहिले ति सबै हडपेर गुठीका नाममा लगेर चलखेल गर्न कार्य फेरी भएको छ । त्यसका विरुद्ध हामी लागेका छौं । म सँग ४२ रोपनी जग्गा को प्रमाण छन् । अहिले त्यही ठाँउलाई खुम्चाएर नगरपालिकाले नगरस्तरीय खेलमैदान भन्दै १ करोड रकम छुट्यो । त्यो पनि वडा अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बसेको ,नगरपालिका प्रमुख सल्लाहकार अध्यक्ष बसेको एउटा दर्ता नभएको क्लवलाई जिम्मा दिइयो । त्यो नै गैर कानुनी छ । बर्षै देखी हाम्रो संजाल यसै काममा निरन्तर लाग्दै गर्दा हामीलाई थाहै छैन । कसलाई दियो भन्दा पनि टहरोहालेर फुटसल होईन खुल्ला मैदानमा स्टेडिएम बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । के यो जायज होईन त । केही साथिहरुले भन्नु भएछ आफुहरुले नपाएर भन्ने कुरा विलकुल गलत हो । जब हामी १२ बर्ष देखी यसै जग्गा र मैदानको लागी लडिरहेका छौं के हाम्रो त्यहाँ केही अपनत्व हँदैन त ? हाम्रो प्रमुख कुरा त नगरस्तरीय खेलमैदान बन्नु पर्छ, तर कुनै पार्टी र व्यक्तिलाई हेरेर होईन समग्र नगरवासीको अपनत्व हुने गरी हुनु पर्छ भन्ने हो जहाँ युवाको माग के हो भन्ने बारे छलफल नभई सरसल्लाह नगरी, व्यवासायिक ढङ्गबाट संचालन गर्न खोज्ने , कोही व्यक्तिलाई पोस्ने काम गर्नु र नगरसमितिबाट पारित गर्नु नै गलत थियो । खुलानै बनाउने भनेर हामीसँग भन्ने तर काम गर्दा नगरपालिका प्रमुखले अर्को गर्ने , जुन क्लवलाई सरोकार छैन त्यसलाई दिन खोज्ने । मैदान अझ त्यहाँ व्याडमिन्टन कोट जत्रो बनाउने खेलमा हामीले खवरदारी गरेका हौं । त्सलाई सिङ्गल प्याराफीट साईटको खुला मैदान बनाउने भन्ने नै हो । पानि खोल्सामा विषयमा केही कर्मचारी नै लागेको भन्ने सुचना आएका छन् त्यसलाई पत्ता लगाई कुनै हालतमा गलत काम गर्न दिईने छैन ।
तपाई भष्ट्रचार, वेथितिका विरुद्ध अभियानमा लाग्नु भएको छ तर त्यस अभियानका केही मान्छे विकाउ पनि भएका छन् भन्ने सुनिन्छ के हो ?
जहााँ पनि अभियानमा एक जनाले मात्र संम्भव हुने कुरा पक्कै होईन हाम्रो अभियानमा पनि सयौं जना साथिहरु जोडिनु भएको छ केही साथिहरु गलत उदेश्यका साथ छिरेका पनि होलान, तपाईले भने जस्तो केही विकाउ पनि भए होलान त त्यस्ता व्यक्ति यस संजालका धेरै दिन टिक्दैनन् । अभियानलाई गलाउन र असफल पार्न कसैले प्रयोग गरे होला तर हाम्रो अभियान रोकिने छैन । त्यस्ता गलत उदेश्य लिएर संजालको नाम लिएर फाईदा लने साथिहरु अगामी अभियानबाट पmालिने छ । हामी त्यस्ता व्यक्तिहरु फिल्टर गरेरै अगाडी बढ्छौं ।
के के कार्ययोजना लिएर अगाडी बढ्नु भएको छ ?
पहिला त हामी अहिले जुन विषयमा लागेका छौं ।पानि खोल्साको जग्गाका लाई गुठीलाई दर्ता गरी अरवपति बनौं भन्ने ध्येयमा लागेका छन ।त्यस्ता भुमाफीयाका विरुद्धका कार्य रोक्न विभिन्न स्टेफ चाल्ने र वृहत अभियानमा लाग्ने सोच बनाएका छौं ।हाम्रो साझा अभियानमा यस क्षेत्रका हरेक वेथिति विसंगती, भष्ट्रचारका कार्य डटेर लाग्छौं । हामीलाई कुनै पार्टीको आस्थाले रोक्दैन । साझा मुद्धामा हामीसँग हरेक तहर तप्काका वौद्धिक साथिहरुको साथ छ उहाँहरुको साथले निरन्तरता पाउनेमा म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु । आगामी दिनमा यस षेत्र भित्रका जुनसुकै वेथिति , गैर काननी ढङ्गका कार्यमा हाम्रो निरन्तर खवरदारी पारी रहन्छ नै ।
भण्डारी बनिन् सर्वाधिक गोल गर्ने नेपाली महिला फुटबलर
दशौं दिनमा प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज,उपचारमा २ लाख ५५ हजार खर्च
आगो लगाएर युवतीको हत्या
६ जिल्लामा महिला सिडिओ
उसुमा जुनीले जितिन् स्वर्ण पदक, नेपालको स्वर्ण संख्या ३६ पुग्यो
पदभार ग्रहण गरेको भोलिपल्टै मन्त्री गुरुङले भेटे गोकर्णका अनाथ बालबालिका
‘भारतलाई देखाउने बेला आईसकेको छ’– सावित्रा भण्डारी
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा यामाहाको महाएक्सचेन्ज मेला शुरु, यस्ता छन् अफर
विदेश अध्ययन गर्ने जाने नेपाली विद्यार्थीलाई बीमाले ल्यायो यस्तो नयाँ नियम
पोखरा देखेर दंगमा परे साग खेल्न आएका खेलाडी !
चिनियाँ पुरुषसँग विवाह गराउँदै मुस्लिम युवतीहरुलाई बेचबिखन
साग खेलकुदः गौरिकाले दिलाइन् नेपाललाई स्वर्ण
किन नयाँ निर्देशकसँग काम गर्छन् अक्षय कुमार ?
न्याय परिषद् सदस्य वैदिकले दिए राजीनामा